Umehluko omkhulu wesimo sezulu phakathi kweSydney ne-United States | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu seplanethi siyashintsha futhi sikwenza ngendlela engasile. Kuleli sonto eledlule sibhekane namaza abandayo anamazinga okushisa aphansi, ukuwa kweqhwa nemvula enamandla. Izwe laseMelika kudingeke ukuthi limemezele isimo esiphuthumayo ngenxa yokuwa kweqhwa okwedlulele okunemimoya enamandla namazinga okushisa aphansi kakhulu. Kodwa-ke, eSydney (Australia) ifinyelele emazingeni okushisa afudumele kunayo yonke yeminyaka engu-79 edlule.
Kwenzekani kulezi zinguquko ezinkulu emazingeni okushisa?
1 Amazinga okushisa aphezulu naphansi
2 Amarekhodi amasha ayatholakala
3 Komunye umkhawulo womhlaba
Amazinga okushisa aphezulu naphansi
Into yokuqala ukucacisa (kulabo abanokungabaza noma abangazi namanje) eSeningizimu Nenkabazwe njengamanje ihlobo. Ukuthambekela kwemisebe yeLanga kwehla kancane kunaseNyakatho Nenkabazwe, ngakho-ke iLanga lishisa kakhulu. Yize iqiniso lokuthi uMhlaba useduze neLanga kunasehlobo, okubaluleke kakhulu futhi okuyisici esinqumayo emazingeni okushisa ukuthambekela kwemisebe yoMhlaba. Uma imisebe yelanga ishaya ngokucace kakhudlwana eMhlabeni izoshisa kakhulu uma ishaya ngokungafanele.
Manje ebusika, imisebe yelanga acishe abheke kakhulu eningizimu nenkabazwe futhi anyukele enyakatho Nenkabazwe. Kodwa-ke naphezu kwalokhu, ihlobo lamanje laseNingizimu Nenkabazwe libhekene namazinga okushisa aphezulu ngokungavamile kanye nemililo yasendle eyinhlekelele.
ESydney bekulokhu kunjalo amarekhodi okushisa ama-47,3 degrees, eliphakeme kakhulu eminyakeni engu-79. Ngokwengeziwe, kunezimo eziphuthumayo zomlilo ezikhishwe endaweni yedolobha elikhulu. NgeSonto eledlule, imililo yangaphandle ibivinjelwe kulo lonke idolobha elikhulu ukuvimbela ukusabalala kwemililo.
Inhloso yamabutho ezokuphepha eSydney, njengalowo minyaka yonke e-Australia, ukunciphisa ubungozi bokusha kwamahlathi, njengoba izwe libhekene nemiphumela emibi yokulahleka kwenhlabathi evundile ngenxa yokuguguleka okuqhubekayo kwenhlabathi okubangelwa ukwenziwa ihlane.
Ngalo lelo Sonto amazinga okushisa ayesezodlula lelo izwe elabhekana nalo ngo-1939 lapho ifinyelela kuma-degree angama-47,8. Amazinga okushisa ePenrith, idolobha elisentshonalanga neSydney, aqinisekiswa yiBureau of Meteorology.
Ngenxa yomlilo, kwacekelwa phansi izakhiwo eziningana ezifundazweni zaseVictoria naseNingizimu Australia.
Amarekhodi amasha ayatholakala
Ngasekuqaleni kuka-Septhemba 2017, abantu base-Australia baxwayiswa ukuthi balungiselele isikhathi esiyingozi somlilo wasendle ngenxa yobusika obomile kakhulu emlandweni wase-Australia kanye namazinga okushisa aphezulu abelindelekile.
Phakathi kukaDisemba 2016 noFebhuwari 2017, ngaphezu kwama-200 amarekhodi wesimo sezulu aphulwa e-Australia, okwenza amagagasi okushisa, imililo yasendle nezikhukhula kulo lonke ihlobo.
Ososayensi bathi amazinga okushisa aphakeme kangako, kuhlanganise nawolwandle, adalwe ukuguquka kwesimo sezulu. Ukuguquka kwesimo sezulu kuthatha izimo zezulu ezijwayelekile ngokweqile futhi kwandisa imvamisa yemicimbi njengamagagasi abandayo, amagagasi okushisa, isomiso nezikhukhula.
Ngisho nomdlali wethenisi waseFrance owayedlala emdlalweni womqhudelwano kwakufanele ahoxe ngenxa yokushisa okukhulu. Kungokokuqala emsebenzini wakhe wonke ukuthi athathe umhlalaphansi emdlalweni.
Komunye umkhawulo womhlaba
Omunye umkhawulo womhlaba uhlupheke ngokuhlukile. Ngenkathi kuse-Australia kuyashisa kakhulu futhi kunezigameko zokusha kwamahlathi, e-United States kube negagasi elikhulu elibandayo elenze isiphepho esinamandla futhi lamemezela isimo esibucayi.
Ezinye izingxenye ze-United States ziye finyelela amazinga okushisa aze afike ku -37 degrees Celsius.
Ngokokuqala ngqa eminyakeni engama-28, isifundazwe saseFlorida, esingesinye sezindawo ezifudumele kakhulu oGwini lwaseMpumalanga, sabona iqhwa liwa enhlokodolobha yesifundazwe, iTallahassee. Lesi siphepho sibizwa ngebhomu lesimo sezulu ngabososayensi.
Njengoba ukwazi ukubona, umhlaba uhlukaniswe ngobuso obubili nesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umehluko omkhulu wesimo sezulu phakathi kweSydney ne-United States